I-PPC Brand Campaign - Izindleko Eziphansi, Imbuyiselo Ephezulu
Tshala imali ku-Brand yakho ngomkhankaso we-PPC Brand
NgoMsombuluko, Agasti 29, 2011 NgoMsombuluko, Okthoba 12, 2015 UChris Bross
Ngakho-ke uqhuba ibhizinisi emakethe egcwele. Kungenzeka kakhulu, lokhu kusho ukuthi ubhekene namanye ama-CPC amahle kakhulu wamagama angukhiye. Noma mhlawumbe ungumnikazi webhizinisi elincane lendawo, ongathanda ukungena ekukhangiseni okuku-inthanethi kodwa nje ungazizwa sengathi unesabelomali esanele sokumaketha sokuncintisana. Njengoba ukuthandwa kwe-intanethi nokuthengiswa kwe-PPC kukhulile, kanjalo nokuncintisana, nakho okunyusa izindleko. Ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuthi i-PPC nje ayikusebenzeli (noma ngeke isebenze, uma ungakaqali), cabanga ngomkhankaso weBrand.
Ngokwesipiliyoni sethu, abakhangisi abaningi be-PPC baqala ngokukhomba amagama angukhiye afanele futhi ahlobene kakhulu nebhizinisi labo. Uma uku-real estate, uzobhida ngamagama asemqoka afana 'namakhaya athengiswayo,' 'athenge indlu,' njalonjalo. Lokhu kwenza umqondo ophelele, futhi yilokho noma yisiphi isikhungo sosizo noma umhlahlandlela we-PPC ozokutshela ukuthi ukwenze. Kuthiwani uma lawo magama angukhiye abiza kakhulu kwisabelomali sansuku zonke noma sanyanga okufanele usisebenzise? Isinyathelo sakho esilandelayo kungenzeka kube ukubheka amagama angukhiye angabizi kakhulu ukuwabhida. Esikhundleni sokuqhubeka nokumba okwami ​​ngalawo magama angukhiye anendleko ephansi afanayo nalawo abizayo, cabanga ukwakha umkhankaso ngokuya ngemigomo yomkhiqizo. Ngamagama 'womkhiqizo,' ngiqonde amagama angukhiye ancike egameni lomkhiqizo wakho.
Njengesibonelo, sizosebenzisa ibhizinisi lami letiyi eliqanjiwe iTeaFor2.com bese sibhala amagama ambalwa ahlobene nomkhiqizo:
Njengoba ukwazi ukubona, yonke imigomo ebhalwe lapha ngandlela thile ihlobene negama lomkhiqizo, i- teafor2.com. Ukwenza imikhankaso yomkhiqizo efana nalena kuvame ukuba yindlela enhle yokwakha ukuqwashisa ngomkhiqizo wakho, futhi usebenzise umkhankaso we-PPC ophumelelayo ngemali encane kunaleyo ongayichitha uxosha amagama angukhiye athandwa kakhulu — futhi ngenxa yalokho abiza kakhulu.
Manje njengoba usunombono oyisisekelo wemikhankaso yeBrand, nazi izeluleko ezimbalwa okufanele uzicabangele lapho uqala:
Engeza I-Google Sitelinks ezikhangisweni zakho emkhankasweni weBrand, ukuze uhambise abasebenzisi uye kusayithi lakho futhi unikeze ezinye izinketho lapho kuvela isikhangiso sakho.
Ungakhohlwa mayelana indawo futhi izandiso zefoni, kanjalo. Ikakhulukazi uma uyibhizinisi elincane lendawo. Ukubonisa abasebenzisi ngqo lapho ukhona nokuhlinzeka ngesixhumanisi esisheshayo sokukushayela kungasiza ukukhulisa umthelela wezikhangiso zakho ze-Brand Campaign.
Imikhankaso yeBrand ilungele amabhizinisi wonyaka, njengoba inikeza inketho yomkhankaso wezindleko eziphansi engaqhutshwa unyaka wonke. Isibonelo, uma uthengisa izimpahla zokubhukuda, ungahle ungabi nentshisekelo yokusebenzisa izikhangiso zakho phakathi nobusika lapho ukuthengisa kwakho kuphansi kakhulu. Kodwa-ke, ukusebenzisa i-Brand Campaign kuzo zonke izinyanga zonyaka kuzogcina igama lakho likhona, futhi kulethe enye yalezo zimoto ezingekho kusizini lapho izikhangiso zakho zonyaka zingasebenzi.
Sidale imikhankaso yomkhiqizo yamakhasimende ami amaningi, eminye yayo ibisebenza kuphela ngokwemigomo yomkhiqizo, kanti abanye baqhuba i-Brand Campaign kanye nemikhankaso yendabuko. Ezimweni eziningi, sithole ukuthi iBrand Campaign idlula ezinye ngezindleko eziphansi. Kuyindlela enhle yokuthi abafikayo be-PPC bangene ngaphandle kokuchitha ithani lemali, noma abaphathi bama-akhawunti we-PPC abaphambili nabanolwazi ukuvuselela i-akhawunti ekhathele.
Tags: brandukumaketha komkhiqizoizikhangiso ze-googleukusesha okukhokhelweumkhiqizo we-ppcukumaketha kwe-ppc
UChris uzakwethu ka EverEffect, onguchwepheshe Khokha Ngokuchofoza Ukuphathwa Kwe-akhawunti, Ukubonisana nge-SEO futhi Web Analytics. UChris uneminyaka engaphezu kwengu-16 yokuhlangenwe nakho kwe-Intanethi nezinkampani zeFortune 500 nobungcweti bokuqondisa nokusebenzisa okuhlangenwe nakho kwe-inthanethi ukukhuthaza ibhizinisi, imikhiqizo nezinsizakalo. Okukhethekile kukaChris kufaka; Ukuzisebenzisela Amakhasimende Ku-inthanethi, Ukusebenza Kwezinjini Zokucinga (i-SEO), Ukumaketha Kwezinjini Zokusesha (i-SEM), i-E-commerce, Ukutholwa Kwamakhasimende Ku-Inthanethi, Amaqhinga Wokuguqula, Ukuthuthukisa Amasu E-inthanethi, Ukulinganiswa Kwe-ROI eku-inthanethi.
Kungani Ama-imeyili Wakho Engawenzi Ebhokisini Lemilayezo Engenayo?
Amandla Engqikithi Eyishumi Nanye Ye-WordPress
Aug 29, 2011 ku-11: 40 AM
Noma ngubani ofuna ukumaketha into eyodwa kudingeka azi ukuthi abantu bathola ngemizwa yabo.Ukuqala, sebenzisa ukukhathazeka esihlokweni sesikhangiso sakho ukuze ukwazi ukuvusa imizwa yezithameli zakho futhi ngithole iWebEnrich enakekela izinhloso zami ze-PPC.